Burma Partnership » Statement: Civil Societies’ Review on Myanmar’s Transition Process: Prospects for 2015 and Beyond
By Myanmar Civil Society Organizations Forum • October 17, 2014
The current transition process has little transparency and is controlled by the government without democratic and meaningful inclusion of democratic opposition forces, ethnic forces, civil society and the people. The liberalization of the economy in the context ofabroken legal framework is creating many negative social and environmental impacts as floods of money flow in from abroad. Much of the country still lives in poverty, while the benefits of the economy opening up has mainly benefitted the elite class, many of whom are crony businessmen connected to the Government and/or the Army. Thus many local communities across the country are experiencing the loss of home, land, livelihood, health, education, social security and natural resources in the name of development supposedly for the people and for poverty reduction. The lack of fair land rights and investment laws has resulted in nationwide land confiscations and new large-scale projects bein g planned and implemented by businesses in partnership with the Government without consultation with the local people.
ဦးအောင်မျိုးမင်း – ၀၉ ၄၄၈၀၁၅၃၀၆
မခင်လေး – ၀၉ ၂၅၆၀၈၀၈၉၇
ဦးသိန်းလွင် – ၀၉ ၇၃၂၅၅၅၆၃
အက်စတာ – ၀၉ ၄၃၀၆၈၀၆၃
မခင်ဥမ္မာ – ၀၉ ၄၅၀၀၆၃၇၁၄
မသိန္နီဦး – ၀၉ ၅၀၉၉၀၉၆
စောထွန်းထွန်း – ၀၉ ၇၃၁၃၄၄၂၄
မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ့အစည်းများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ
အရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ မြန်မာနိုင်ငံ အသွင်ကူးပြောင်း ရေးဖြစ်စဉ် အပေါ် ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် နှင့် အလွန် ဖြစ်နိုင်ခြေ အလားအလာများ
၁၄ – ၁၆ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၄
မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ရပ်မှ အရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကွန်ယက်များ စုစုပေါင်း၂၅၇ ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် များ စုစုပေါင်း ၆၅၀ ကျော်တို့သည် ရန်ကုန်မြို့ တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်မှ ၁၆ ရက်နေ့ အထိ ၃ ရက်ကြာ တွေ့ ဆုံ၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သော နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲမှုနှင့် အသွင်ကူးပြောင်း မှု အခင်းအကျင်း အောက်တွင် ပြည်သူများ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော စိန်ခေါ်မှု များ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေ အန္တရယ်များနှင့် ပတ်သက်သော အမြင် သဘောထား ဖလှယ်ခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး သုံးသပ်ခြင်းများ ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံ၏ သမိုင်းအတွက် အလွန် အရေး ကြီးသော အခြေအနေကို ဖြတ်သန်းနေရ ပါသည်။ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် များနှင့် ၈၈’ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်များ အပါအဝင် ရာနှင့်ချီသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား များ ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာခြင်း၊ အဓိက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘော တူညီချက်များ ရေးထိုးခြင်း၊ လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် သတင်းမီဒီယာ အပေါ် ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုများ အား ဖြေလျော့ပေးခြင်း စသည့် အပြု သဘောဆောင်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ပေါ်ထွန်း လာခဲ့သည်။ သို့သော် အချို့သော ယခင်ဆယ်စုနှစ် များစွာမှ စိန်ခေါ်မှု များမှာ ယနေ့တိုင် ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည့်အပြင် ထပ်မံ ကြုံတွေ့နေရသော စိန်ခေါ်မှု အသစ်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသွင် ကူးပြောင်းရေးသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေး၍ အန္တရယ် ကြီးမားသော အခြေအနေကို ဦးတည် နေသည်။ ထို့ကြောင့် အခြေအနေမှန်ကို နားလည်နိုင်ရန် အသွင် ကူးပြောင်းရေး ကာလ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အပေါ် ပြန်လည် သုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်၍ မြန်မာ့ အရပ်ဘက် လူထု အဖွဲ့အစည်း များကြား အနာဂတ်တွင် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ရေး ဆွေးနွေး သွားရန် ဤနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို ကျင်းပရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှတဆင့် နှစ်ပေါင်း (၆၀) ကျော် ဒုက္ခခံလာ ခဲ့ရသော ပြည်သူ များ၏ အကျိုးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေ စီရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေ ချောမွေ့အောင်မြင် စေရန် ရည်စူးကာ အောက် ပါ ဆွေးနွေးချက် များနှင့် အကြံပြုချက်များကို လက်ရှိ အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ပေးရန် တင်ပြတောင်းဆို ပါသည်။
ဤသုံးရက်တာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် ခေါင်းစဉ်ကြီးခြောက်ခုကို စင်တင် စကားဝိုင်း ၆ ခု၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ၆ ခုဖြင့် ဆွေးနွေး အဖြေရှာခဲ့ကြ သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စ၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ကဏ္ဍ အသီးသီး ဒေသအသီးသီးရှိ အခြေအနေ များကို ပြန်လည်လေ့လာ သုံးသပ်ကြည့် သောအခါ အကောင်း ဘက်သို့ ဦးတည်သော ပြောင်းလဲမှုများ အလွန် အားနည်းနေပြီး အချို့အခြေအနေ များတွင် ပိုမိုဆုတ်ယုတ်သွား သည်ကို တွေ့ရသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ဖြစ်စဉ်သည် ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံ အင်အားစုများ၊ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများ၊ အရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပြည်သူလူထုမှ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းအရ အဓိပ္ပါယ် ရှိသော ပါဝင်ခွင့်မရပဲ အစိုးရ ထိန်းချုပ်မှု အောက်တွင်သာ ရှိပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အလွန် အားနည်း နေသည်။
ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော တရားရေး မဏ္ဍိုင်အောက်တွင် တံခါးဖွင့်စီးပွားရေး မူဝါဒကြောင့် ပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးများ အလုံးအရင်းနှင့် ဝင်ရောက် လာကာ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှု များ ဖြစ် ပေါ် စေသည်။ စီးပွားရေး လွတ်လပ်ခွင့်သည် အစိုးရ သို့မဟုတ် စစ်တပ်နှင့် ဆက်နွယ်သော လက်ဝါးကြီးအုပ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ခရိုနီ အများစုပါဝင်သည့် ချမ်းသာသော လူတန်းစား ကို အကျိုးပြုနေချိန်တွင် အများစုသော ပြည်သူလူထု ကြီးမှာ ဆင်းရဲပင်ပန်း စွာ နေထိုင်နေရဆဲ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်ပြည်တစ်ဝှမ်း ရှိ ဒေသခံ လူထု အများအပြားသည် ပြည်သူ့ဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဆင်းရဲ မွဲတေမှုလျော့ချရေး ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် မိမိတို့၏ အိုးအိမ်၊ မြေယာများ၊ ကျန်းမာရေး ပညာရေး လူမှုဘဝလုံခြုံရေး၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား အခွင့်အရေး၊ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် သဘာဝ သယံဇာတများ ဆုံးရှုံးနေရလျက် ရှိသည်။ တရားမျှတသော မြေယာဥပဒေ များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေများ မရှိခြင်း ကြောင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်း မြေယာ သိမ်းဆည်းမှု အမြောက်အများ ဖြစ်ပေါ်နေ လျက်ရှိပြီး အစိုးရနှင့် အကျိုးတူ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များသည် ဒေသနေ လူထု များနှင့် လုံလောက်သော ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပဲ အကြီးစားစီမံကိန်း သစ်များအတွက် အစီအစဉ် ချမှတ်မှုများ၊ ဆက်လက်အကောင် အထည်ဖော်မှု များ ပြုလုပ်နေ ဆဲဖြစ်သည်။
အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလမတိုင်ခင် ဥပဒေများသာ မဟုတ်ပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခြင်းနှင့် စီတန်း လှည့်လည်ခြင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ ကဲ့သို့ ဥပဒေများကို ဖိနှိပ်သော ကိရိယာ များအဖြစ် အသုံးပြုနေသည်။ ထို့ပြင် မြေယာ ဥပဒေများ၊ အလုပ်သမား ဥပဒေများ၊ ပညာရေး ဥပဒေများ၊ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဥပဒေများအပြင် ကျားမ တန်းတူရေးနှင့် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကန့်သတ် ထားသော ဥပဒေကြမ်း များသည်လည်း ပြည်သူလူထု၏ လူအခွင့်အရေးနှင့် အကျိုး စီးပွားကို ကာကွယ်ပေးခြင်း မရှိသည့်အပြင် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူလူထုနှင့် အရပ်ဘက် လူထု အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်း ပါဝင်ခွင့်များ အကြံပြုတင်ပြခွင့်များ မရရှိခဲ့ပေ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှ စတင်ခဲ့သော ပဏာမ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘော တူညီချက်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်သည် ရှေ့ဆက် မတိုးနိုင်ပဲဖြစ်နေပြီး ကချင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းများတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လမှ ယနေ့ အချိန်အထိ တိုက်ပွဲ များဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေလျက်ရှိသည်။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများ၊ တရားစီရင်မှု မရှိသော သတ်ဖြတ်မှုများ၊ တရား လက်လွတ် ဖမ်းဆီးမှုများနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ အပါအဝင် အခြားလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေလျက် ရှိသည်။
လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေ သူများသည် တစ်နိုင်ငံ လုံး အတိုင်းအတာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အဆိုပြုချက်များအပေါ် သဘောထား ကွဲလွဲမှုများ ဆက်လက်ရှိနေပြီး ဆွေးနွေးမှု များသည် (၁၂) လ အထိ ကြာမြင့်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိအချိန်အထိ အရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ့ အစည်းများ၊ အမျိုးသမီးနှင့် လူငယ်များ၏ ပါဝင်မှု မရှိသလောက် အားနည်းခဲ့ပြီး ကျိုးပျက် လွယ်သော အခြေအနေတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အပစ်ရပ် ထားပြီးသော နေရာ များတွင်လည်း တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ် လျက်ရှိပြီး တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားရာ ဒေသ များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများ ဆက်စပ်လျက် ရှိကြောင်း သုံးသပ်ပါသည်။ ထို့ပြင် တိုက်ပွဲများ၊ ရင်းနှီမြှုပ်နှံမှု များနှင့် မြေယာသိမ်းယူမှု များကြောင့် ပြည်တွင်း နေရပ် စွန့်ခွာ ဒုက္ခသည်များ ပိုမို တိုးလာသည့်အပြင် ၎င်းတို့နှင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်ပြည်သူလူထုများအား နေရပ်ပြန်လာရေး ကိစ္စရပ်များအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန် မှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်နေရသည်။
ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖော်ဆောင်နိုင်မှု မရှိဘဲ အရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ့အစည်း များအပေါ် ဖိနိပ်ချုပ်ချယ်မှုများ မြင့်မားလာလျက်ရှိသည်။ သတင်းထောက် များကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပုဒ်မများဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုများကြောင့် ယခင် သတင်းမီဒီယာအပေါ် ကန့်သတ် မှုများ ဖြေလျော့ပေးခဲ့သည်ဟူသော အမြင်အစား စိုးရိမ်မှုများက အစားထိုး နေရာ ယူလာသည်။ မီဒီယာ ဥပဒေသစ်များသည် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို အပြည့်အဝ ခွင့်ပြုခြင်းမရှိပဲ အစိုးရမှ ဆက်လက် ချုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ပြဋ္ဌာန်းပေး ထားသည်။ ထို့ပြင် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ဖမ်းဆီးမှုများနှင့် ဒဏ်ခတ်မှု များကြောင့် မီဒီယာ အသိုင်းအဝိုင်းအကြား အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အကြောင်း အရာများ အပေါ် ရေး သားရာတွင် စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုများနှင့် မိမိကိုယ်ကို ဆင်ဆာဖြတ်တောက် မှုများ ဖြစ်စေရန် တွန်းပို့ပေးနေသည်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အများစု လွတ်မြောက် လာသော်လည်း အချို့မှာ ဆက်လက် အကျဉ်းကျနေဆဲဖြစ်ပြီး ထပ်မံ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းမှု များလည်း အများအပြား ရှိနေသည်။
ထို့ပြင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်း အမုန်းစကားပြန့်ပွားမှုများနှင့် ဘာသာရေး အစွန်းရောက် အုပ်စုများ၏ လူမျိုးရေးနှင့် ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် လှုံ့ဆော်မှုများမှာ စိုးရိမ်ဖွယ် အခြေအနေ သို့ ရောက်ရှိ နေသော်လည်း အစိုးရမှ တစ်စုံတစ်ရာ အရေးယူ ဆောင် ရွက်ခြင်း မရှိပဲ ပြဿနာ၏ အဖြေကို ရှာဖွေရန် အလွန်ခက်ခဲနေ ဆဲဖြစ်သည်။
လွှတ်တော်များသည် ဟန်ပြလွှတ်တော်များသာဖြစ်ပြီး တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တရားရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၏ အဓိကစိန်ခေါ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိသည့်အပြင် ဒီမိုကရေစီကျသော အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာရန် အလှမ်း ဝေးနေဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော်၏ ၂၅% ကို တပ်မတော်က ရယူထား သည့်အတွက် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျသည့် မည်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်ကိုမဆို ပယ်ချနိုင်သည့် အာဏာရှိနေသည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လွှတ်တော် အမတ်များကို ပြည်သူ များမှ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း မရှိမချင်း မြန်မာနိုင်ငံသည် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ပြင် တရားစီရင်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ကဏ္ဍများ ၌ အဆင့်ဆင့် တာဝန်ရှိ သူများသည် တပ်မတော်မှ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည့်အတွက် တရားရေးစနစ် သည် တပ်မတော်နှင့် အစိုးရ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှ လွတ်လပ်၍ အမှီအခို ကင်းမှု လုံးဝ မရှိသည့်အပြင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် လုပ်နိုင်စွမ်းရည် မရှိသောကြောင့် လွန်စွာ အားနည်းနေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် တရား ဥပဒေ စိုးမိုးမှုမရှိခြင်းနှင့် ကျူးလွန်သူများအား အပြစ်ပေးအရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိသည့် အခြေအနေ ကျယ်ပြန့်စွာ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
သို့သော် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းများကြားတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အသွင် ကူးပြောင်းရေး ဖြစ်စဉ်များကို ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းရန် ဆွေးနွေးမှုများ၊ သင့်လျှော်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်နေသည်ကို မတွေ့ရပဲ အချို့သော အခြေအနေ များတွင် လေးနက်စွာ ထည့်သွင်း စဉ်စားခြင်း မရှိသောကြောင့် မလိုလား အပ်သော ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်နေ သည်။
နိုင်ငံတကာ အစိုးရများသည် ယခုအချိန်တွင် အစိုးရနှင့် များစွာပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်မှု များရှိလာပြီး နိုင်ငံရေးအထောက်အပံ့များ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီများ များစွာ ဝင်ရောက်လျက် ရှိသည်။
အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ တိုင်းပြည်အတွင်း ပိုမိုများပြား လာသည့်နောက်ပိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူမှုရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အခြား ကဏ္ဍများကို အထောက်အကူပြုမှုများ မြင့်တက်လာ သော်လည်း ထိရောက်မှု မရှိသောကြောင့် လူထုအကျိုးခံစားခွင့် အလွန်နည်းပါး လျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် အစိုးရ မဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း များသည် ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုံလောက်သော ညှိနိုင်းဆွေးနွေး မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပဲ မိမိအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်း များကို ဦးစားပေး လုပ်ဆောင် မှုများကြောင့် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်း ကဏ္ဍနှင့် လုပ်နိုင်စွမ်းများ အားနည်းလာသည်ကို တွေ့ရသည်။ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ အားကောင်းရန် ပံ့ပိုးပေးသည့် အစီအစဉ် များသည် အမှန်တကယ် ထိရောက်မှု နည်းပါးနေပြီး ခွဲခြား ဆက်ဆံမှု များလည်း ရှိနေသည်။
ယခင်အစိုးရလက်မှ ကျန်ရှိနေသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အပါအဝင် အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလအတွင်း ဖမ်းဆီးခံ ထားရသော တောင်သူ လယ်သမားများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူများကို ချွင်းချက် မရှိ လွှတ်ပေးရန်
အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ စတင်ချိန်မှစ၍ ပြည်သူနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်း အဝိုင်းအား ပေးအပ်ထားသော ကတိကဝတ်များကို တာဝန်ယူတာဝန်ခံ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရန်
ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒနှင့် အတည်ပြုထားခြင်း မရှိသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအား ၂၀၁၅ မတိုင်မီ ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အညီ ပြည်သူ့ဆန္ဒ ခံယူပြီး ပြင်ဆင်ရန်
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများအပါအဝင် ဥပဒေများကို အများပြည်သူ အလွယ် တကူ လေ့လာနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာပေး လုပ်ငန်းများအား အလေးထားဆောင်ရွက်ရန်
ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရများအား သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်များမှ တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ခွင့် ရှိရန်၊ ၎င်းတို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို အပြည့်အဝ တိုးမြှင့်ပေးရန်
အသွင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် ပြည်သူများ၊ အရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ့ အစည်း များနှင့် ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံများ၏ စစ်မှန်၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ပါဝင်မှုကို လမ်းဖွင့်ပေးရန်
မြေယာဥပဒေ၊ မြေလွတ်မြေရိုင်းဥပဒေ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့် စီတန်း လှည့်လည်ခြင်း ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ ပညာရေးဥပဒေ၊ အလုပ်သမားဥပဒေ စသည့် ဥပဒေများ အပါအဝင် ပြည်သူများအား ချုပ်ကိုင်ဖိနှိပ်သည့် ဥပဒေများကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး၊ လူထုအကျိုး ကို ရှေးရှု သည့် မူဝါဒများချမှတ်ခြင်းနှင့် ဥပဒေသစ်များ ပြဋ္ဌာန်းရာတွင် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရေးနှင့် ပြဋ္ဌာန်းသည့် လုပ်ဆောင်မှု အဆင့်တိုင်းတွင် ဥပဒေအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ လူထုများအား (ဥပမာ လယ်သမားများ၊ အလုပ်သမား များ၊ ကျောင်းသားများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ ဒုက္ခသည်ပြည်သူများ) အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရှိရေး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်
တရားရေး ဝန်ထမ်းများ၏ ဘဝရပ်တည်မှု အတွက် လုံလောက်သော ခံစားခွင့်များ သတ်မှတ်ပေးခြင်း အပါအဝင် အခြားတရားရေး စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုများပြုလုပ်၍ လိုအပ်ပါက တရားရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များကို ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စစ်မှန်သော လူထုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် အစားထိုး ခန့်အပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်
အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥပဒေအား ပါရီအခြေခံမူ များနှင့် အညီ ပြင်ဆင်၍ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မှု လုပ်ပိုင်အာဏာ၊ ရဲဌာနများနှင့် တပ်မတော်အပါအဝင် မည်သူ့ကိုမဆို လွတ်လပ်စွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့် လုပ်ပိုင်အာဏာ အပြည့်အဝအပ်နှင်းကာ တိုင်ကြားမှုများအတွက် လွတ်လပ်သော တရားရုံး ဖွဲ့တည်ထောင်ရန်၊ ကော်မရှင်နှင့် အရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ့အစည်းများကြား အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှုများကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ပံ့ပိုးရန်
ဖယ်ဒရယ်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်ကို ပထမဦးစားပေး လုပ်ငန်းအဖြစ် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအဖြစ် စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် အဆင့်တိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် လူငယ်များ အပါအဝင် အခြား အရေးကြီးသော လူထုအုပ်စုများ ပါဝင်နိုင်သည့် အခြေအနေနှင့် ယန္တရား များကို ဖန်တီးပေးရန်
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေး တာဝန်ခံ လုပ်ဆောင်ရန်
နယ်စပ်ဒေသ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းရှိ ပြည်သူလူထုအား အကျိုး မပြုသော အကြီးစား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများကို ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သည့် အချိန်ကာလတွင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရန်နှင့် ဆောင်ရွက်ဆဲ စီမံကိန်းများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီး ဒေသလူထုများ၏ ဆန္ဒအပေါ် အခြေခံ၍ လုံးဝရပ်ဆိုင်းရန်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့် ပြည်သူများအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ မဖြစ်ပေါ်အောင် မှန်ကန်သော မူဝါဒများ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ရန်
စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေး မရရှိမီ ဒုက္ခသည်များအား ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး အတင်းအကြပ် ဖိအားပေးဆောင်ရွက်မှုများ မပြုလုပ်ရန်နှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ကိစ္စကို တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သူ ဒုက္ခသည်များ၊ ဒုက္ခသည်အခြေပြု လူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်
ဘာသာပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်မှု အစီအစဉ်များကို နိုင်ငံတော် အဆင့် ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ အမုန်းပွားစေ သော လုပ်ဆောင်မှုများကို ထိထိရောက်ရောက် တားဆီး အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ရန်၊ အမုန်းမပြန့်ပွားရေး အသိပညာပေးမှုများကို လုပ်ဆောင်ရန်
အခြားမည်သည့် ဘာသာကိုမျှ အတင်းအကျပ် ချုပ်ကိုင်မှုများ မပြုလုပ်ရန်နှင့် ဘာသာအသီးသီး ကိုးကွယ်သော တိုင်းပြည်အတွင်းရှိ လူတိုင်းအတွက် လုံခြုံမှုရှိသော ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးရန်
လူငယ်နှင့်ပတ်သက်သော စစ်တမ်းများ၊ သတင်းအချက်အလက် များကို ကောက်ယူ၍ လူငယ့်ရေးရာ မူဝါဒများကို ရေးဆွဲ ချမှတ်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လူငယ်များကို ဦးဆောင်ခွင့်ပေးရန် နှင့် ၎င်းလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာရေး အထောက်အပံ့များ သတ်မှတ်ထားရှိရန်
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အပါအဝင် အမျိုးသမီးများအား ခွဲခြားဖိနှိပ်ထားသော တည်ဆဲဥပဒေများကို ပြုပြင်ရန်နှင့် ဥပဒေသစ်များပြဋ္ဌာန်းရာတွင် CEDAW စာချုပ်ပါအချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန်
ပြည်သူလူထုအတွက် စစ်မှန်သော အပြောင်းအလဲ ဖန်တီးနိုင်သည့် လူထုမှ ဦးဆောင်သော အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို အထောက်အကူပြု နိုင်စေရန် ထိရောက်သော ပြုပြင်မှုများနှင့် ပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်ရန်
လက်ရှိအစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရများကြား ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အကူအညီ အထောက် အပံ့များ ပေးအပ်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ခြင်း စသည်တို့အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပြုသည့် လုပ်ငန်း တိုင်းတွင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းများ၏ ရှုပ်ထွေးမှု၊ စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်များနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကြား ဆပ်စပ်မှုကို အလေးအနက်ထား ထည့်သွင်းစဉ်စား၍ မိမိပါဝင်မှုကြောင့် မြန်မာပြည်သူလူထုကို မထိခိုက်ရအောင် Do No Harm ပေါ်လစီဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ မဖြစ်အောင် ဒေသနေပြည်သူများနှင့် ကြိုတင်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုများ၊ ကောင်းစွာ ကြိုတင်အသိပေး ထားသော ဒေသနေ ပြည်သူလူထုများ၏ လွတ်လပ် စွာ ပေးသိ သဘောတူ ညီချက် (Free, Prior and Informed Consent) အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အညီ အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်
သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို ပြည်သူလူထုထံ အသိပေးဖြန့်ဝေရန်
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရမှ ကတိကဝတ် ပြုထားပြီး မလိုက်နာသေးသော နိုင်ငံတ ကာ စာချုပ်စာတမ်းများနှင့် ကတိကဝတ်များ (CEDAW, CRC, UNSCR 1325 and 1820) ကို အကောင်အထည် ဖော်လာရေး ဖိအားပေး တိုက်တွန်းရန်
အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးရန်
နိုင်ငံတကာ လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး စံချိန်စံညွှန်း များနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပဋိပက္ခ ပိုမိုကြီးမားစေသော အပြုအမူ များ ရှောင်ရှားရန်
မြန်မာအရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍ၊ လုပ်နိုင်စွမ်းရည်နှင့် တန်းတူ ခံစားပိုင်ခွင့်တို့ကို လေးစား အသိအမှတ်ပြုရန်
မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် အစီအစဉ်ထက် ဒေသနေ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှုများမှ ထွက်ပေါ်လာသော အစီအစဉ်များ ကိုသာ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုး အကောင်အထည် ဖော်ရန်
Tags: 2008 Constitution, 88 Generation Peace and Open Society, Arbitrary Detention, Burma Army, Burma Government, CEDAW, Daw Aung San Suu Kyi, Extrajudicial Killing, General Assembly and Human Rights Council on the situation of Human Rights in Myanmar, IDPs, Impunity, Myanmar Civil Society Organizations, Myanmar Civil Society Organizations Forum, Myanmar National Human Rights Commission, Parliament, Sexual Violence, UN Security Council, United Nations, Women, Youth